Baro AutoCAD Civil 3D, kheyraad qiimo leh - Gofumed
Janaayo, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS, Engineering, topografia
Inaad xubin ka noqotid AUGI MexicoA waxay leedahay faa'iidooyin badan, mid ka mid ah ayaa ka mid ah qalabka ama barashada si loo barto. Xaaladdan waxaan soo bandhigayaa waxqabadka ugu wanaagsan ee waxbarashooyinka ee isticmaalka 3D munaasabadaha waddooyinka, farshaxanka iyo geospatial. Qaar waa fiidiyowyo, faylasha kale ee pdf. Waa lagama maarmaan in la diiwaangeliyo si ay u awoodaan inay u arkaan, sidaa darteed waa inay galaan magacooda magacooda iyo password, ama isdiiwaangeliso markii ugu horeysay.
AutoCAD Rayidka 3D ee Waddooyinka
Diyaarinta Dib u Celinta Siyaasadeed ee 3D Is-dhexgelinta wadiiqooyinka si loo qeexo waddada dib-u-noqoshada 3D.
Naqshadeynta Rasciga ee 3D Naqshadeynta horyaalada fasalada 3D ee adeegsanaya laba muuqaal: Laynaha Lifaaqyada iyo Xirfiriska Degdegga ah.
Abuur Qoraalka Looga Hortagayo Design Design Si loo abuuro isgoysyada wadooyinka, waxaan u baahannahay inaan ogaanno kor u qaadida heerarka profiles ee meelaha ay ku habboon yihiin. Calaamadaha qoraalka ee la tixraacey (oo laga heli karo 2008 version) wuxuu na siinayaa hab aad u deg-deg ah si loo helo macluumaadkan.
Qalabaynta Qalabka Qalabka 3D Waxaan qaban doonaa Qaabinta Qalabka iyo Qalabka Qalabka Qalabka Qalabka ee Naqshadeynta.
Abaabul Socdaal Wacan oo Waddada 3D Layligaan waxaan ku sameyn doonaa safar dheelitiran ee waddada 3D.
Xisaabiyaan Qaybaha Isticmaalida Isku-Duubida 3D Horumarinta mashaariicda wadooyinka, gaar ahaan naqshadeynta waddooyinka, waxay inta badan u baahan tahay xisaabinta mugga quudinta, oo ku saleysan meelaha qaybaha kala duwan.
Sida loo isticmaalo Maamulaha Waraaqaha Saxeexa Sharciga ee Ganacsiga Autodesk Design Civil Autodesk Companion, bandhigaysaa aalad in ay ina siinaysaa fursad in la abuuro qaab print caadiga ah ku lug leh warshadda, profiles iyo qaybaha iskutallaabta ku Sugno guud set oo dhan qorshayaasha loogu baahan yahay mashruuc waddo si otomaatig ah iyo oo leh heerarka loo baahan yahay.
Calaamadee isku xirka banner AutoCAD Civil3D Mileage Caadi ahaan waxaan u baahanahay inaan ku calaamadeyno isku-dhafka dhididka mashruuc wadada ah oo leh calan muujinaysa masaafada miisaanka.
Isticmaalka Macaamiisha AutoCAD ee Cartography
Nadiifinta Qalabka ee AutoCAD MAP Isticmaalida qalabka Mashruuca AutoCAD, si aad wax ugu soo saartid hawlaha kartoonka.
Qeexaan Nidaamka Isku-xirka ee AUTOCAD 3D 2008 Mawduucaan waxaan ka hadli doonaa sida loo dhexgeliyo habka isku-duwidda ee nawaaxigeena AutoCAD 3D 2008 ama Map-ka AutoCAD 3D 2008, iyo inta badan nidaamka isuduwidda ee LAMBERT (INEGI Mexico)
Lisp si loo abuuro shaxanka Dhismaha Dhulka Mawduuca ee loogu talagalay AutoCAD Waxay abuureysaa Jaantuska dhismaha ee Qodobbada Muujinta ee AutoCAD 2000 iyo kaddib.
AutoCAD Civil maareynta maareynta sare
Falanqee Heerarka Muuqaalka Macaamiisha AutoCAD 3D Abuurista dhulka iyadoo la isticmaalayo weydiinta iyadoo la adeegsanayo pane hawsha khariidada si loo xusho faylka macluumaadka walxaha si loo abuuro dusha sare iyo sameynta falanqaynta kor loo qaado.
Dusha sare ee Xeebaha 3D Dabaqayo dusha marka waxaan leenahay data ma dhulkeena waa xaalad xiiso leh helitaanka macluumaadka dheeraad ah ka baxsan muuqaalka guud ee dhulka, layligan muujinaysaa habraaca loo fidinayo meelaha gudahood AutoCAD Civil 3D.
Isticmaal Xogta Raster si aad u fuliso "Drap" ku riix dusha sare Fiidiyowgu wuxuu muujinayaa sida loo fuliyo muuqaalkan qaab sidan oo muuqaalku u helo qaabka gargaarka dusha sare.
Soo saar dhibcooyinka gudaha 3D Layligaan waxaanu soo dhoofin doonnaa faylka dhibcaha waxaanan abuuri doonaa dusha
Meelaha Dhexgalka iyo Warbixinta Centroid ee 3D Madani Xaalado badan waxaa lagama maarmaan ah in la helo sawirka hoose ee 3D oo metelaya mugdi ama mug weyn oo loogu talagalay xisaabinta masaafada gaadiidka ee dhaqdhaqaaqa ciidda
Abuuri Layn Jebis ah Si aad u qeexdo dusha sare ee 3D Qaybta aasaasiga ah ee mashruuca kaabayaasha ah ayaa ah in la helo aalado la isku halleyn karo, kaas oo damaanad-qaadaya dhamaystirka mashruuc wanaagsan oo ku haboon fulinta shaqada.
Abuuraan qiyaasaha miisaanka Xirfadaha iyo qaybaha kala duwan Abuuritaanka calaamadaha shuruudaha caadiga ah ee soo bandhigidda mashaariicda wadooyinka, calaamadani waxay muujineysaa qiyaasta tooska ah iyo qiyaasta ee u muuqda labadaba qaybaha kala duwan iyo qaybaha kala duwan.
Isticmaalka AutoCAD 3D mashaariic kale
Abaabulaan Daaruubyada Muuqaalada 3D Waa mid aad u caan ah markaad ka shaqeyneyso noocyada dhulka hoostiisa, oo ku qasban in lagu fuliyo shaqooyinka ka soo baxa shaqooyinkaas oo qabanaya hawlaha hoos u dhicidda si ay u awoodaan inay siiyaan foomka iyo dheecaan si ay u helaan.
AutoCAD 3D Meelaha Qalabka Waxaa jira adeegsiyo badan oo loogu talagalay qeybaha kala duwan (Ururrada). Qeybta lagu sawiro masaafurinta waxaa ka mid ah qaybaha lagu ilaaliyo derbiyada, tareenada, buundooyinka, kanalka, godadka, tunnelyada iyo waxyaabo kale oo badan.
Waxyaabaha loo isticmaalo isticmaalka guud ee 3D
Qorshaha Wax-soo-saarka ... Dukumiintiyada Macaamiisha AutoCAD 3D Fiidiyowkani wuxuu muujinayaa qalab wax-soo-saarka si loo baabi'iyo geeddi-socodka diiwaan-gelinta naqshadahaaga.
Soo bandhigida 3D DWF gudaha PowerPoint Fiidiyowgu wuxuu na siin doonaa aragti ku saabsan Soo Bandhigidda Fulinta iyadoo la isticmaalayo Autodesk Design View ee PowerPoint.
AutoCAD Interface User Interface 3D 2008 Layligani waxaan ka hadli doonaa InterCate 3D 2008 interface AutoCAD
Nooca Guud ee Miisaanka ee AutoCAD Horumarinta abuurista miisaanka gudaha AutoCAD.
Gaadiidka Xogta Laga Qaado 3D Mararka qaarkood waxaan helnaa xog laga helay ilo kale sida billabo, DXF, LandXML ama GIS files fudud, sida hay'adaha barbaro ay ku jiraan dhibcood, khadadka dusha, alignments iyo profiles in aan qayb ka ahayn database a.
Maaree Mashaariicda Waaweyn ee Gaar ah Iyadoo Civil 3D waa qalab aad u dhamaystiran oo ina siinaysaa gargaarka weyn design ee mashaariicda kaabayaasha, sidoo kale waa run in barnaamijka oo dalbaday in badan oo ka mid ah khayraadka hardware iyo si ay u maareeyaan mashaariic waaweyn, waxqabadka computer waxaa si weyn hoos u dhacay. Hab in la xaddi badan oo data shaqeeyaan waa adigoo isticmaalaya "Access Direct" (tuuryo). Maaree Mashaariicda Waaweyn ee Gaar ah Gaar ah - Qeybta II
Samee qoraal gaar ah Isticmaalka tibaaxaha ee AutoCAD 3D 2008 si loo qeexo summadaha gaarka ah
Ku xir khariidada AutoCAD oo leh waraaqo dibadeed
Isku xidhiidh AutoCAD MAP iyo Oracle Fiidiyowgu wuxuu muujinayaa sida loola xiriiro Oracle oo ka soo gala Map Autodesk, galitaanka Oracle schemas, u kala saar shayada iyo sifooyinka faylka Autodesk Map oo u dir Oracle.
Xiriirinta Macluumaadka MS-Access ee Xayeysiinta 3D Xidhiidhinta Xogta Isku-xirka Microsoft oo la xidhiidha 3D 2007 / 2008
Xogta Isku-duuban ee Daabacaadda MS-Access si loo Map Map 3D Macluumaadka Chaining ka soo Microsoft Access Database ilaa Map 3D 2007 / 2008
Isku-xirka Database-yada ee AutoCAD MAP Isdhexgalida macluumaadka database iyadoo la adeegsanayo AutoCAD Map
Si ku meelgaar ah AUGIMX ayaa dib u habaynaysa boggeeda iyo xiriiriyahan aan la heli karin, waxaan rajeyneynaa inaan mar labaad helno caymiskan iyo caymis dheeraad ah.
Post Previous«Previous Waxaa jira kaneeco ku jirta kormeerkaaga
Post Next Sidee inay soo galaan wadataa on Google Earth / MapsNext »
67 Jawaab in "Baro AutoCAD Civil 3D, kheyraad qiimo leh"
Rayidka ayaa kuu soo diraya cinwaankaaga e-maylkaaga, laakiin waan ka boodayaa,
-Ku xir-tirka barafka kala-soocidda kala duwan iyo dusha biyoodka.
- Xisaabinta mugga
waxa kaliya ee aan u baahanahay inaan barto sida loo sameeyo
Julian Cruz Ramos isagu wuxuu leeyahay:
Waxyaalaha aadka u wanaagsan iyo fududahay inaad barato.
marx isagu wuxuu leeyahay:
hello alguen ayaa iga caawin kara mawduucyada warshadda dhirta iyo qaybaha kala duwan ee xfa ... haddii ay leeyihiin sheybaar ma ogaan karo haddii ay ii diri karaan majecohua16@hotmail.com iyo mahadsanid hore
Maxaad ula jeeddaa nadaafadda?
EDITH isagu wuxuu leeyahay:
fadlan haddii qof uu i siin lahaa caawimaad 3d waxaan doonayaa inaan barto si aan fayadhowr ugu shaqeeyo aquitevez_19@hotmail.com muchas gracias
Galab wanaagsan, waa inaad noqotaa mid taariikhda la xiriirta horumarka farsamada. Waad ku mahadsantahay waxtarkaaga.
AugiMEXCCA si ku-meelgaar ah ayay u bedeli kartaa boggeeda, sidaas darteed badi khayraadka lama heli karo.
Waxaan rajeyneynaa in aad dhawaan arki doontaa boggaaga cusub cusbooneysiiyay.
FRANCO RUIZ isagu wuxuu leeyahay:
hugaamiye aad u fiican ayaa ah kuwa ugu fiican iyo caawinta demaciado wali saaxiibtiis .... laakiin waad ku mahadsan tahay
Si fudud oo cajiib ah. Waxaan u arkaa mid aad u cad, fudud, iyo xaddidan.
Waad ku mahadsantahay wixii aad baratay
hello, qof ayaa iga caawimi kara in aan isku hagaajiyo tuubooyinka tuubada iyo bixiyaan dabiicigooda dabiiciga ah oo aan ka badneyn nooca ...
Waxaan qabaa dhibaatooyin soo dejinta qaybaha kala duwan ee koorsada biyaha ee laga sameeyay 3d madaniga ah. markaan soo dhoofiyo tirada qaybaha sii kordhaya ee jihada biyaha sababtoo ah sababta ay tusaaluhu u bixiyeen natiijooyin khaldan. Qofna ma yaqaanaa sida saxda ah u soo dhoofiyo? Ama maxaan u bedeli karaa marka macluumaadka la geliyey feylka?
Waad ku mahadsantahay dareenka.
WILMER GEORGE isagu wuxuu leeyahay:
fiidiyowyo aad u fiican, aad u muujinaya
myra zavala isagu wuxuu leeyahay:
hello, waxaan ka helaa mid aad u xiiso leh dhammaan macluumaadka la soo bandhigay, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii uu jiro xiriir u dhexeeya luuqadda hawlgalka ee halkaas oo khariidadan lagu rakibay si loo helo macluumaadka Oracle, sababtoo ah markii aan xiriir la sameeyey bd ee Isbaanishaan waxaan soo bandhigayaa macluumaadka jadwallada aan dhib lahayn iyo marka ay ku jiraan Ingiriisi sidaas darteed macluumaadka miisaska aan la soo bandhigin, waxay ii sheegtaa tirada guud ee diiwaanada ay ku jirto.
Ma jiraan wax qaabeyn ah oo aan u baahnahay inaan sameeyo si aan u awoodo inaan u muujiyo xogta sidan oo kale Ingiriisi?
Waad ku mahadsantahay aad iyo aad ugu hambalyaynayso goobtaada, waa waxbarasho aad uwanaagsan
rayidka ah isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan hayaa casharrada fiidiyowga ah ee 'autocad rayidka ah' 3d 2010, halkan waa waxa ku jira
- Isku xirka unugyada iyo nidaamka isuduwidda.
-Kooxda dhibcaha ah sida waafaqsan qaabka: PENZD, NEZ, DNE.
- Abuuritaanka qaababka soo dejinta dhibcooyinka.
- Tilmaamaha qodobbada.
-Ku darista koox dhibcood ah: sida uu qabo dhererka, sida lagu sharaxay.
Ku xir xidhxidhka qodobbada lagu qeexay "polyline".
- Hirgelinta xogta dhibicda (Dimension, Description, North, East.etc).
-Kusiiji ama tirtir dhibcooyinka gacanta.
- Isugeynta qodobbada xogta ee dhoofinta.
-Ku daritaanka dusha sare ee faylka dhibcaha.
-Ku darista dusha oo abuuray faylka dhibicda.
-Ku darista dusha sare ee TIM
-Ku darista dusha sare ee polylines (curves heerarka autocad)
-In la hubiyo dusha sare iyadoo la isticmaalayo polylinea (xuduud).
-Ku daridda khadadka xuduudaha (lakabyada, inta u dhaxaysa curyaaminta yaryar iyo kuwa waaweyn)
-Ku daridda cabbirada curkay iyo qaabeynta
-Carrimooyinka curiska ee mabda '(abuurka qaabka)
-Ka nadiifi meelaha dusha sare ama dhererka (Achurado sida ay u kala sareeyaan), sameynta miiska shaaha iyo daabacaadda.
-Ka nadiifi dusha meelaha jihada jajaban, falanqaynta kale iyo jadwalka mawduucooda.
-Recurrido oo ka dhigi lahaa dhibic biyo ah (oo ku habboon safarka webiyada iyo durdurrada)
3.- La qabsashada:
-Ku dar-galinta isku-xidhka mareynka
- Xawaaraha qeexida
-Dhinaca dareenka deg-deg ah ee isku-xirnaanta
-Ururka qaababka isku xirka, habeynta laylinta isku xirka.
-Ku darista qoraalada isku xirka.
-Ku xidh-xidhka si aad u muujiso: Km
-Ku qaadista iyo joojinta PI, curves.
-Isku taxalid jilbaha.
-Si aad u feejignaato
-Ku darista walxaha curuqa iyo nuqul ka qaadista Excel.
Isku dheelitirida kala-sooc
-Ku xirnaanta isku xirnaanta sida loola jeedo (khad toosan, curves iyo alwaax)
-Ku darista warbixinta xogta isku dhafan.
-Ku sameynta Xirfad Maskaxeedka iyo ujeedka dhinac kasta.
-Ku darista guutada (juqraafi, heerka dhulka, heerka kor u qaadka, horumarka, isku dhafka, dhererka sare ee dhulka iyo heerka)
-Shile iyo calaamadeynta waxqabadka (PI, PC, PT, K, Lc, saamileyaal sare, iwm)
-Ku darista astaanta (lakabka, boogaha, miisaanka)
-Samiinada si degdeg ah
-Qiimaynta iyo abuurista PIV, geli curfaha toosan.
-Tixgelinta qalabyada hoos-u-dhigga waxay u weeciyaan nidaamka mitirka.
-Ku darista qeybaha kala-tallaabooyinka hoos u dhigga:
.Isku day dhinaca wadooyinka, waddada iyada oo aan la marin jidadka, kanaalka trapezoidal, kanaalka toosan
-Ku noqoshada wadiiqada iyo koritaanka korantada.
-Deegashada mugga dusha masaafo
-Ku darista calaamadaha qaybaha kala duwan:
Cabbirka dhulalka, heerka jiirada, miisaska meelaha gooyaa iyo buuxi.
-Dugsiyada iyo bandhigida qeybaha kala duwan.
-Carruurta goobaha, tirada.
-Kulalka miisaska iyo mugga ee Excel.
- Wax soo saarka maqaarka:
. Ku qorida calaamadaha iyo daaqadaha leh miisaan kala duwan oo lagu soo bandhigayo qorshooyinka
. Soo bandhigida astaanta kumbuyuutarka
. Ku dheji calaamadaha ilaa qiyaasta kiiloomitir (Meelaha, xogaha qulqulka toosan, iwm)
Nidaaminta soo bandhigida qorshooyinka dhulka iyo falanqeynta kiiloomitir.
-Ciidinta qaybaha iskutallaabta ee polyline
-Ciidamada hoosaadka khadadka
-Kulalka Google Earth ee dusha sare iyo dhinaca kale.
9.-Ku shaqeeya mashaariic waaweyn: Shorcuts Data
11.- Soo-saarista dadka rayidka ah si ay u helaan
Haddii aad rabto, waxaad iigu qori kartaa:
percy isagu wuxuu leeyahay:
fadlan qof caawiyo si ay u abuuraan arrimo for wadada a in 3d sokeeye, HASI sida loo sameeyaa dalka Aad ayaad u mahadsantahay laakiin si fiican haddii ay ii soo dir email my percy_o_@hotmail.com muchas gracias
Aad ayaan ugu faraxsanahay macluumaadka lagu siiyey ahay, tan iyo waa ay adag tahay si aad u hesho xaliyo shaki qaarkood manidu ee koorsada of design ah, sidaas oo kalaan idinku hambalyaynayaa sokeeye wanaagsan sida iyo paguina waxaa si aad u wanaagsan loogu talagalay, waxaana rajeynayaa inuu kaa caawiyo in tutorial kasta oo isku diyaarinaya mustaqbalka ay doonayaan.
Ku salaamayaa dhamaan golaha.
Pauline isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan ahay dhisiye, laakiin wax khibrad ah kama qabo barnaamijkan waxaan qabaa inaad waxtarkaagu aad u qiimo badan yahay
SIDEE AYAAN U XAQ U RAACI KARAA DHAQAALAHA UGU DANBEEYA CHANNEL WAXAAN AHAY INAAN DIIDO MARKII UGU DAMBEEYAY; HADDII AAN SAMI KARAA BARNAAMIJKA HALKAN HOOSE SI AY UGU SAMEEYAAN TALADAHA FARSAMADA Qaynuunkayaga.
Byaney isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantahay inaad ka qayb qaadatid fiidiyowyadaas oo iiga adeegi doona koorso aan qaadanayo oo ay ii adeegi doonaan inaan ku tababaro.
Waad ku mahadsantihiin wax badan oo ku saabsan waxtarka, waxay yihiin wax aad u liitay. Waa inay noqotaa mid xiiso leh dhammaan 48 labada videos.
MEXICANTEC isagu wuxuu leeyahay:
In xiriirka hoose si aad u dalbato wax wanaagsan, waxaa VIDEOS 48 AUTOCAD SOKEEYE 3D 2010 Educational asalka ah oo tayo leh ee Spain, iyadoo xal tayo sare leh, ayaa sidoo kale ku siin files loo isticmaalay videos in adeega sidii template ah inay si dhakhso ah u shaqeeyaan ee aan mashaariicda, waxaan iibsaday oo ay ahayd oo qiimihiisu yahay, dabcan fiican SOKEEYE 3D 2010 si ay u bartaan guriga oo aan bixinta koorsooyinka fasalka qaali ah, ama laydin khiyaanayn by mercadochoros content xun, MercadoLibre, rematazo, DeRemate, Arbacada ah. iwm
Halkan waa demo fiidiyowyada asalka ah, inkasta oo kaliya qayb ka mid ah shaashadda ayaa la arkaa, fiidiyowyada waa shaashad buuxda.
48 VIDEOS CODSIGA CUSUB 3D 2010 OO KU SAABSAN GURIYO
Waan bogaadinayaa hambalyada, laakiin waa inaan garwaaqsadaa in qoraalkani yahay soo koobis kooban oo ka kooban AUGI MexCCA, halkaas oo nuxurka lagu keydiyay iyo mudnaanta ay leedahay dad badan oo isticmaala AutoCAD oo iska kaashaday soo diritaanka dhaqankooda wanaagsan. Waxay ku qaadatay saacado badan qabashada shaqooyinkaas, waxaan ku qaatay daqiiqadihii 40 daqiiqo qabashada xulashada iyo boostada.
Oscar Vásquez isagu wuxuu leeyahay:
Wow weyn oo xiiso leh tan haddii uu yahay super ......
Waad ku mahadsan tahay ...
Boggan Aad ayay u dhammaatay ..
CANNIBAL isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsan tahay waxtarka badan, waa meesha ugu fiican ee aan helay, hambalyo ku socota webka
MAWDUU QAATU KA HELI KARTAA
Waxay kaa caawinaysaa inaad shaqeyso Mashruucyada ApliCAD, kuwaas oo ujeedkiisu yahay dhammaystirka shaqada
WAA aad u wanaagsan videos ee, waxaan IIBKA KOORSADA A OF AUTOCAD SOKEEYE 3D oo aan marnaba SHAQEEYO AS ogaa WAXBA KU SAABSAN BARNAAMIJKA THIS TODAY IYO WAA yar ii jecli in aan arko HADDII AAD QABTO VIDEO WAX KA SIDA LOO BILOW HORUMARINTA EE MASHRUUCA A for kaliya E bartay wax go'doon.
WAXAA LAGA HELAYAA AUGI
Fiiri, kama tiirno AUGI, kaliya waxaan horumarinaa kheyraadkooda. AUGI waxay u baahan tahay in lagaa diiwaangaliyo si aad u daawato waxa ku jira, ma jiro wado kale oo aad ku sii waddo isku dayga.
wareega august isagu wuxuu leeyahay:
Ugu horreyntii waxaan kuugu mahad naqayaa deeqdan, Waxaan idiin hambalyaynayaa, waxaan ku siinayaa 10
Sideen u codsadaa? sababtoo ah waxay sameeyaan qoraalka si aad u adag oo isku dayeyna waan khaldanahay
usbuuci isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan raadinayay cajalado fiidiyoow ah, waana arrin aad u adag, laakiin waxaan helay boggaan oo ma ahan mid dhib badan oo aan ku soo dejin karo tabobarrada aan ku taliyay, hadda waxaan isku dayi doonaa inaan arko sida ay u shaqeyso, ka dibna waxaan kuu sheegi doonaa haddii ay u qalantay
Andres Sandoval O. isagu wuxuu leeyahay:
Gacaliye, kooxaha wadahadalka ee Isbaanish waa kuwo aad u wanaagsan. Waxaan ka socdaa Chile oo waxaan isticmaalaa C3D-ka 2006 iyo xaqiiqadu waxay tahay in ay soo hagaagto wax badan oo ay tahay qalab aad u fiican oo lagu xisaabinayo iyo naqshadaynta shaqooyinka la xiriira dhaqdhaqaaqa dhulka. Iskuday xiriirka http://forums.augi.com/index.php Anigu waxaan ka faa'iiday. Waxaan la kulmay dhowr asbuuc ka hor, waana wax fiican, sababtoo ah bey'ad khatar ah oo aad ka faalloon karto dhibaatooyinkaaga barnaamijka, waxaana jira tiro dad ah oo ku jira golahan kaas oo khibradaada qiimo leh ku kordhineyso maalin kasta. Barnaamijku wuxuu leeyahay daciifnimo, laakiin ma caawin karo, laakiin iska dhaga tiri awooddiisa weyn. Nasiib wacan wadada ...
Waa inaad iska diiwaangelisaa AUGI
Roandl Espinoza isagu wuxuu leeyahay:
Sideen u soo dejisan karaa fiidiyowyada,
michel raul isagu wuxuu leeyahay:
tani waxay ku saabsan tahay. waa mid aad iyo aad u wanaagsan oo wax badan u barto si ay u bartaan in badan oo sidaas darteed xirfadlayaashu waxay noqon karaan kuwo kaamil ah iyada oo loo mahadcelinayo qalabkaan
fikirkaagu wuu fiicanyahay. Ivan Waxaan u maleynayaa inaan wax badan ka baran doono buuggan qaaliga ah ee AutoCAD Civil 3D mahadsanid fikirkaaga.
Ma ogi haddii aad markale isku laalaan karto «AutoCAD Civil 3D Channel Qaybaha» furitaanka int. ama aniga ayaa ii soo diri kara warqad mail fashion.g_omar@hotmail.com
Waxaan u baahanahay inaan barto in aan naqshadeeyo tunnel, buug gacmeed. Waan u mahadcelinayaa isaga
DF waxaa jira xarumo tababar oo kala duwan oo ay bixiso AutoDesk, oo ka mid ah:
ICIC, Degmada Dhexe
Xiriirintani waxay kaloo leedahay ATC kala duwan ee Mexico, iyada oo lambarradooda telefoonadooda:
Uriel isagu wuxuu leeyahay:
Hello, bogga aadka u fiican ee 3D madani, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay koorsooyinka siinayaan DF ama wax sidan oo kale ah oo barnaamijkan ah, aad ayaad u mahadsantihiin. Salaan!
Fikrad maleh Roger. Waan ka xumahay
hello fiican .. bogga bogga :) .. Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado meesha aan ka heli karo waddooyinka madaniga ah 3d 2009 ee u adeega ..? porq ee webka Anigu ma caawin karo laakiin bilaabi, Waxaan qalad ku yidhaa ..: S ... Waxaan rajeynayaa in gargaarkaaga dhawaan .. mahad
ee AUGI MEXCCA waxaa jira hage deg deg ah oo lagu barto 3D macaamiisha aan ka soo dejiyo waana wax aad u fiican, waxaan heystaa labo hage oo Isbaanish ah, laakiin ma aqaan sida loo xiro Waxaan u diri doonaa Maestro Alvarez si ay ugu gudbiso
Pedro Manuel Guaya Pauta isagu wuxuu leeyahay:
Waa fiicanahay in aan soo saaro qoraallada khadadka xuduudaha, laakiin waxaan haystaa naafonimada si aan u sameeyo isku xirnaanta iyo qaababka, halkaas oo aan ka heli karo tusahan si ay u sameeyaan faallooyinka,
JH isagu wuxuu leeyahay:
WAXYAABAHA LAGU QAADO QIIMEYNTA WAA MAXAY
JIMY LLANOS ESPINOZA isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan doonayaa in aan galo GALLERYADA IYO TANNELSIGA SIYAASADDA 3D, WAXAAD U QAADAY
kanaalka daadinta isagu wuxuu leeyahay:
Qalab aad u fiican oo loogu talagalay injineernimada, waxaan jeclaan lahaa inaan barto sida loo sii wado qaybaha, haddaad i caawin karto
jimser isagu wuxuu leeyahay:
Tababarka ugu fiican ee madaniga ah 3d aad buu u dhammeystiran yahay waxa ugu fiican ee lagu helo inuu barto 3d madani ah
Waa inaad sameysaa qaab qoraal ah, u qoondeeysid cabirka oo aad ka saartid sifooyinka mashruuca.
Waad ku mahadsantahay macluumaadkaaga, xaqiiqda ah in arrimuhu ay soo baxeen, waxaan soo dejiyey qodobo, waxaan abuuray dusha sare, anigu ma calaamadin karo, waxay i tusaan qoraallo aad u ballaaran, way ku caawin karaan.
Waxaan u mahadcelinayaa horay
ELI isagu wuxuu leeyahay:
WAA MAXAY DOWLADDA BUUXINTA QAYBAHA CHANNEL.
WAXYAABAHA WAXYAABAHA LAGU DHAHAY.
Angel Roberto isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ka helayaa dhammaan qoraalada xiiso leh.
Waxaan jeclaan lahaa in aan is diiwaan geliyo si aan u galo dhibaato la'aan.
Waxaan rajeynayaa inaad u ogolaato.
JACC isagu wuxuu leeyahay:
SIDA LOOGU TALAGALAY QAYBAHA KALA DUWAN EE AAD SHAQO AH,
IYO SIDA UGU HORREEYA KOOXAHA IYO DILLAABIDDA QAYBAHA GALMADA
Wada-tashiga ugu wanaagsan waa mid aad ujecel in lala kulmo dadka adiga oo kale,
Waa hagaagsanahay in ay jiraan isbeddel dhab ah oo leh qaababka cusub ee CIVIL 3D, si kastaba ha ahaatee, waxaan u maleynayaa in la raaco taxanaha oo ay ku jiraan isbedelada cusub. Waad ku mahadsantihiin xog badan.
bogga koobaad ee khayraad badan leh
Waxaan ahay qof bilawga ah, waxaanan ogaanayaa in meeshan ay tahay mid weyn,
haa, waxay u egtahay in isku xirka la jebiyey ... waan hubin doonaa
jose armando isagu wuxuu leeyahay:
si fiican ayaan kaaga mahad celinayaa maadadan laakiin faylka «AutoCAD Civil 3D Channel Qaybaha» ma furin waxaan jeclaan lahaa inaad mar labaad soo dejiso mahadsanid
rdv isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan u baahanahay inaad i baro sida aan u sameyn karo si aan jawi u noqdo xaqiiqo dhab ah.
Waxaan u maleynayaa in laga bilaabo fiidiyowyadan inay tahay bilow wanaagsan, markaa AUGI MexCCA waxay leedahay soo celin badan oo ka badan midka lagu soo bandhigay jagadan.
Waxaan isticmaalaa 3D dad aad u yar, waxaan rabaa in aan wax badan barto, adiga oo haysta khibrado badan, fadlan i sii tilmaamaha si aad u hesho macluumaad, waa barnaamij aad u xiiso badan
in la joojiyo amilcar elias medina isagu wuxuu leeyahay:
Xiriirkani waa mid xiiso leh, tan iyo inta badan waxaan ka shaqeynayaa GIS waxaanan aad u xiiseynayaa barashada 3D madaniga, maadaama aan sidoo kale u shaqeeyo sidii lataliye madaxbannaan waxaana fududahay in aan maareyno CAD marka loo eego SIG ....
Waa mid xiiso leh fikradiisa iyo waxa uu ka muujinayo autocad
Macluumaad aad u wanaagsan oo loogu talagalay dadka hadda bilaabay, waxaan rajeynayaa inaan heysto wax badan oo ka mid ah tabarucaadyadaada, mahadsanid wax walba
Hi Ivan, bogga AutoDesk waxaad ku ogaan kartaa shirkadaha ay iibiyaan alaabta iyo adeegyadan.
halkan waxaan kuu soo dirayaa xiriirka DF
IVAN GABRIEL MARTINEZ HERNANDEZ isagu wuxuu leeyahay:
si ay u naqshadeeyaan wax ay kudhaqaaqaan qaabka madaniga ah ee autocad 3d ee magaalada mexico df iyo haddii ay bixiyaan sidii aan ula tashado jadwalka
Waa inaad booqataa AIGI MexCCA, waxaa jira kheyraad badan
galka isagu wuxuu leeyahay:
Tani waa lacagta ugu horeysa ee aan ku helayo Spanishka.